I-Chrome Kitchen Sink Faucet ene-Pull-Out Sprayer
ikaliwe 4.95 Kwi-5 esekelwe kuyo 37 amanqaku umthengi
(37 ncomo ngumthengi)
Tsala phantsi umxube oxuba ikhitshi 2310800C
· Nika into eyonwabisayo kuyo nayiphi ikhitshi
· Uyilo lwakudala nolwengoku
· Zenziwe ngezinto ezisemgangathweni
Kubandakanya ikhithi yokuzifaka ngokwakho
-Ientsuku ezingama-90 zokubuyiselwa imali-isiqinisekiso
Unayo le nto yokutshintsha ipompo yethu emfutshane / ephantsi coz sinobunzima bokuhlamba iimbiza eziphakamileyo / ezinde kwaye yonke into ilungile..kuphela kwento endiyitshintshayo kukufakelwa kobushushu nobandayo okungagqibekanga kukutsalela kuwe kushushu kwaye andikufuni coz ndinabantwana ngoko ndadibanisa umbhobho oluhlaza okwesibhakabhaka kwivalve eshushu ivumba elibomvu kwivalve ebandayo..nayo yonke enye into ilungile kakhulu thenga.
Ndifuna ukutshintsha itephu yam endala yasekhitshini, ixabiso lilungile, ke ndathenga ngaphandle kwamathandabuzo. Isitshizi sokutsala ezantsi kunye nokuseta oku-3 kumnandi! Isivumelwano sonelisa kakhulu!
Ujongeka kwaye uziva kamnandi.
Ndigqibile ukufaka itompo ekhitshini lam. Kulula ukuyifaka kwaye akukho sidingo sokubiza ingcali. Kulula ukutsala umlomo wesitshizi phantsi kwaye usivumele sibuyele esiphatheni. Kwenzekile ukunxibelelana konikezelo ngamanani alinganayo nale yunithi. Kwinqanaba lamaxabiso, kulungile kakhulu.
Ukuthelekisa le faucet ngokuchasene namagama amakhulu afana neMorn, Delta, njl.ukuziva nokubonakala kuyathelekiswa. Le tephu kulula ukulawula uxinzelelo lwamanzi kunye nobushushu.
Yinto elungileyo kwaye umgangatho ulungile njengeepompo ezibiza kakhulu, siyifakile le faucet kwisinki yethu yekhitshi. Kwakunokufakwa ngokulula kwaye kwenziwe ngokungagungqiyo ukusukela oko. Ukugqitywa kulula kakhulu ukucoceka, kuyala ukukrwela. Inendawo elungileyo yokutshiza kwaye isitshizi sisebenza kakuhle ngokunjalo, akukho kuvuza okanye kuxhoma phantsi. Siyayithanda le faucet intsha.
Emva kokufunda zonke uphononongo, ndithathe isigqibo sokuba sizakuzama le faucet. Kwi- $$$ kubonakala ngathi kufanelekile. Wowu! Siyavuya kakhulu yile faucet. Okwangoku awukholelwa kumgangatho wexabiso. Ndingacebisa le faucet kuye nakubani na ofuna ukuphucula nokuba kuhlahlo-lwabiwo mali okanye hayi. Ixabiso elikhulu, ukujonga okuhle. Umsebenzi omkhulu.
Itephu enkulu yexabiso elikhulu! Ndithengile itepu katata womthetho kutshanje kwivenkile enkulu yebhokisi yezixhobo malunga namaxesha amabini amaxabiso entengo yale faucet. Ngokuqinisekileyo ndinokuqinisekisa ukuba umgangatho wale mpompo kunye nokulula ukuyifaka wawungcono kunangaphambili endiwuthengileyo. Iza nemigca yamanzi-soloko utshintsha imigca yakho yamanzi !!! Kwakhona ukunamathela kwesisindo kwakulula ukufaka. Ngokubanzi sonwabe kakhulu ngetephu.
Indlu yam iyahlaziywa, ke ndiyayidinga le faucet. Imisebenzi njengoko kulindelwe. Akukho nto yokukhalaza ngayo iyimveliso elula kodwa isebenza kakuhle! Ngokwenene ndikhulula indawo eninzi kwikhawuntara xa ndifuna nje ukuhlamba isitya okanye ezimbini okanye izinto ezingakhuselekanga kokuhlamba izitya.
Ndandithandabuza kancinci kwixabiso kwaye inyani yayingelilo igama elikhulu. Ndihlala ndisoyika izinto ezincinci ezinxulumene nemibhobho eyaphukileyo, kuba uza kuchitha amawaka ukulungisa umonakalo onokuthi ugcinwe yimveliso eyongezelelweyo eyi- $ 20 okanye eyi- $ 30. Nangona kunjalo, le yimveliso entle! Ibhanti yam endala yaseMelika yompompo wophawu lwaphuka kwintambo enomsonto, ukusuka kurusi. I-gasket inokuba ibivuza kangangexesha elithile, kwaye izikrufu zandihluba nam. Ndigqibele sele ndisika imigca emidala yamanzi ndophula itephu eseleyo ukuyikhupha. Yayiloluhlobo lobusuku obubi, kwaye ndinethemba lokuba kwakungabonakalisi oko ndiza kukunyamezela. Kodwa yayingeyiyo. Ukufaka oku kwakuhamba ngokuhamba ngenqanawa kwaye kulula. Isinki sam sinokuseta imingxunya emithathu ngenxa yoko ndisebenzisa ipleyiti yesiseko. Ndiyazithanda iipleyiti ezisisiseko ze-foam gasket endaweni yeeplastiki ezincinci ozifumanayo. Ngelixa ndandijija izinto phantsi ungabona ukuba amagwebu atywina izinto kwaye aphele emehlweni. Ndiqinisekile ukuba le ayizukurusa njengeyam indala. Ndiyakuthanda kakhulu ukugqiba, ayithengisi ukuba iyamelana nendawo kodwa ayifumani ndawo zamanzi okanye iminwe. Mhlawumbi ngenxa yokuba ingenasici kwaye ingeyiyo i-nickel? Andiqinisekanga, kodwa oko kwakumnandi ukubona kwaye kungalindelekanga kweli xabiso lamaxabiso.
Kuphela inkxalabo endinayo kuxa nditsala ispout ukuhlamba izitya umbhobho womngxunya / isinki yokutshintsha kancinci. Oku kungabangelwa kukuntywila kwam ngenxa yokuba ndingenacici kwaye ndingenanto. Andikho rhabaxa kwizinto zam ke andikhathazeki kakhulu kodwa yinto endiyigcina ngasemva kwengqondo yam xa ndihlamba izitya. (Lumka kwimeko efanelekileyo.)
Ndingacebisa oku kuye nakubani na! Kutheni uchitha i $ 100… $ 150… $ 200 kwitepu kwivenkile enkulu yebhokisi xa ungayifumana lento ngeqhezu lexabiso ??
Ngaphambi kokuthenga le mveliso, ndafunda ngenani lokujonga malunga namava amabi avela kwabanye abathengi abazise le mveliso. Nangona kunjalo, ndaye ndagqiba kwelokuba ndizame kwaye ukuza kuthi ga ngoku (ziintsuku ezi-3 kuphela zokusetyenziswa) yonke into isebenza kakuhle ngaphandle kokuvuza.
Ndiya kuvuma, ndizabalazile kufakelo kancinci, kodwa oko bekungekho mpazamo kule mveliso. Imiyalelo yayicace gca, ndandiphupha nje kakubi xa yonke imibhobho yam emidala icinyiwe isuswe. Emva kokuba ndidlulile kuloo ngxaki, ukufakelwa kombhobho omtsha kwakulula kakhulu.
Ukuya kuthi ga ngokusebenza, intloko ebanzi yokutshiza inoxinzelelo olukhulu kum. Nangona kunjalo, uxinzelelo kuseto "lomjelo" lubonakala luphantsi kancinci. Andazi ukuba lo ngumcimbi ngombhobho okanye ukuhanjiswa kwamanzi. Nokuba yeyiphi na indlela, ayisiyiyo inkxalabo enkulu njengoko ndikhetha ukuyigcina kuseto olubanzi lokutshiza nangayiphi na indlela.
Ngapha koko, iyonke ndiyilinganisile le mveliso ngenxa yexabiso, ukufakwa ngokulula, kunye nenkangeleko entle. Ukuba ndineengxaki kwixa elizayo, ndiza kuwuhlela uphononongo lwam ukuze ndilubonakalise ngohlaziyo.
Ukuba urenta indawo le yeyona ndlela ilungileyo yokuphucula ukusuka kumbhobho wokuntywila wokuntywila ongahlali ulungile oza nerenti. Ungabeka itephu endala ngaphambi kokuba uhambe. Le faucet yayilula kakhulu ukungena kuyo, ithathe i-hubby ngaphandle kwexesha kwaphela. Isinki yethu eza nekhitshi yayingenasitshizi kunye nespout esifutshane esihlala kufutshane kakhulu ngaphakathi kwisinki ke ngoko nokuba isinki ibinezitya ezimbalwa kuyo, bekunzima ukuzihlamba. Le faucet curves inyusa INDLELA ephezulu ukusinika igumbi elininzi kakhulu, kunye nayo ine-sprayer ekufuneka ibe ngumgangatho wazo zonke itepu / isinki kula maxesha. Ngokuqinisekileyo yayitshintshe umdlalo, yenziwa lula ukucoca, kwaye kulula ukuyicima xa siphuma kwirenti yethu kwaye sifuna ukubuyiselwa imali.
Ukuthengele oku ngaphezulu kokunye ukulungiswa koqeshiso.
Ngokwesiqhelo olu hlobo lokutsala iipompo zii-100 zeedola ukusuka kwi-homedepot kunye ne-Lowes ngenxa yoko bendikrokrela ukuba oku kungangumgangatho olungileyo.
Ndimele nditsho ukuba ndichukumisekile ngumgangatho wemali, ubunzima buninzi kakhulu bokutsala itompu ibuyele ngaphakathi. Ezi ndlela zimbini zisebenza kakuhle kodwa iqhosha lokunqumama linokukhaba ukuze ndive ukuxhaswa koxinzelelo imibhobho kodwa akonelanga ukuba ndixhalabile ngayo.
Ukwakhiwa kwesinyithi kuyamangalisa kweli nqanaba lamaxabiso kwaye akukho zinto ziziva zibuthathaka.
Ukufakelwa kulula, inxenye yomceli mngeni kuphela zizikere eziqhotyoshelweyo itywina phantsi kwesinki. Ukuba une-screwdriver okanye i-drill engasindi ayisiyongxaki ingako.
Ngokubanzi le yinto endiza kujonga ukuyithenga kwakhona kwezinye irenti zam ndicinga ukuba le imele uvavanyo lwexesha!
Kuthengwe enye yesibini kwenye iyunithi, ukufakelwa kwakulula kakhulu kwaye kwathatha malunga ne-30mins ngombane wamandla wokuqinisa izikere eziphakamayo phantsi kwesinki.
Isinki yethu ayinzulu kakhulu kwaye bendifuna indlela elula yokugcwalisa iimbiza. Ndiyathanda kakhulu ukuba inezicwangciso ezi-2 zokuhambisa kunye nokutshiza! Ndiyifakile le (ineziphazamiso) kakuhle phantsi kweyure. Ikhola yokutshixa inendawo evulekileyo evumela ukuba iqhubeke ngaphandle kokuyinyusa ithumbu. Inqaku elinye elimnandi lofakelo yimibhobho ephawulwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nobomvu, eyenza ukubambeka komoya. Bendijongile kwiivenkile zebhokisi kolu hlobo lwetephu. Amaxabiso kwiiyunithi ezinokuthelekiswa ayetyhala umda kuhlahlo-lwabiwo mali. Le tephu inazo zonke izinto endizifunayo kwaye iyimveliso eyomeleleyo eyakhiwe kakuhle. Ixabiso elikhulu, itepu enkulu kwaye ndonwabile ukuba ndiyithengile le nto!
Ndiyayithanda le faucet kulula ukuyifaka isebenza kakuhle ngokugqibeleleyo kwikhitshi lam elingagqitywanga lokuntywila ngexabiso elikhulu ndingathanda ukuthenga esinye njengesipho.
Le faucet yenzelwe ukunxiba ikhitshi lethutyana njengoko silungisa okwethu. Siyayithanda kakhulu kangangokuba siza kuyisebenzisa kwindawo entsha. Umelele kakhulu, ulwakhiwo olusemgangathweni, akukho zixhobo zeplastiki. Ukude ngokwaneleyo, kulula kakhulu ukuyifaka, kulula ukuyisebenzisa, kunye nokuguquguquka okuhle ukusuka kumbhobho wokutshiza. Kwaye konke ngeqhezu leendleko zegama "lamagama", ezihlala zenziwe ngeplastiki ezininzi. Ifowuni efanelekileyo ye $$.
Bendinalo ixhala elincinci ingathi “iplastikhi enexabiso eliphantsi” kodwa ayenzi njalo! Ndiphinda ndenza ikhitshi lam kwaye itepu ibonakala intle !!! Ndiyathanda ukuba ndingatshintsha uxinzelelo lwamanzi ndize ndimise kancinci ukuhamba kwamanzi xa ndicofa izitya ezigcina amanzi kunye nemali kwityala lam lamanzi. Ndinesinki yokuphinda kabini kuba inkulu kwaye ilungile.
Ngokwenyani ibikukuthenga okuhle kakhulu. Kwakulula kakhulu ukuyifaka. Elona candelo linzima yayikukususa umdlalo wokugqibela kuba wawumdala kakhulu. Kodwa lo msebenzi wawulungile, kulula ukuwudibanisa, kwaye mhlawumbi undithathe malunga nesiqingatha seyure, kubandakanya nokucoca, ukuze yonke loo nto itshintshwe. Ndonwabile ngokusebenziseka kunye nokukwazi ukutshintsha ukusuka kushushu ukuya kubanda, ukusebenza kwesitshizi, kunye nokunweba. Ibhola yesisindo ilumkile. Yithande le teknoloji kunye nendlela yethu entsha eqhuba ngayo umgangatho wokuphila ongcono kwaye ufikeleleke ngakumbi.
Ndichukumiseke kakhulu yiyunithi. Ukugqiba kuhle. Inye kuphela into ekufuneka ndiyiphawule ngayo isiphatho sibuthathaka kwaye kufuneka umntu alumke xa ejika itompu njengoko unokufumana amandla angaphezulu kunokuba kufuneka. Ngaphandle koko ndichukumisekile yinkampani kunye nokulandela abakwenzileyo kwimveliso yabo. Ngaba uya kuthenga kwakhona xa kufuneka njalo.
Ndiyayithanda itephu yam entsha! Ndiyifakile phezolo. Kwakungekho nzima kakhulu ngaphandle kokudibanisa imigca yamanzi kulungelelwaniso. Ukuba unako, fakela ngaphambi kokuba ubeke itompu endaweni yayo. Okwam kwakunzima kakhulu ukukwenza kuba indawo ephantsi kwesinki yam icinene kakhulu. Ngaphandle koko ihambe kakuhle kwaye ndiyayithanda itompu entsha!
Ndonwabile kakhulu ngale mveliso. Kwakulula ukuyifaka. Sinabantwana abancinci kwaye kulula kakhulu ukuba basebenzise, ​​nabo. Sikwalandele neengcebiso zomnye ovavanyayo kwaye satshintsha unxibelelwano olushushu / olubandayo ukuze okushushu kube kukutyhala umva kunye nokubanda ukuya phambili. Isebenza kakuhle kwaye ngokuqinisekileyo ndingacebisa le mveliso !!
Kudala ndifuna ukubuyisela itephu yam endala ekhitshini okwethutyana ngoku. Iseti intle kakhulu kwaye isebenza kakuhle! Kwakunobuqhetseba obuncinci bokuhambisa ufakelo (ngakumbi icandelo xa kwakufuneka ndiqinise kwisitya sokuntywila - ndaye ndagqiba ndacela umntu ukuba andincede), kodwa ndade ndayifumana kwaye itepu isebenza kakuhle! Ndiyayithanda intloko erhafayo yokurhola ukutshiza isitya sokuntywila. Iseti yeza neigloves ezimhlophe zomqhaphu nangona ungaqinisekanga ngokupheleleyo ukuba zezantoni. Ukupakishwa kwakumnandi kakhulu, kwaye bendijikeleze kamnandi ngokuthenga kwam!
Andilindelanga ukuba itompu ngeli xabiso ibe yile ilungileyo. Ndibona abanye abantu bekhalaza malunga nokuziva kweplastiki kwento. Izinto aziziva zintofontofo kodwa yile nto sinokuyilindela kwimveliso ngeli xabiso. Izinto ezibonakalayo zivakala njengentsimbi engenasici kodwa zilula kunoko. Lixesha kuphela elinokuphendula ukuba lihleli ixesha elide. Itephu inentloko eyandisiweyo njengezinye iimpompo kodwa ndicinga ukuba azisebenzisanga ntwasahlobo ukuze intloko ingarhoxisi ngokukhawuleza njengezinye. Nangona kunjalo, isebenza kakuhle. Imveliso ifike ikwimeko egqibeleleyo, ukupakishwa kwakumnandi. Khuthaza kakhulu ukuba ujonge itampu efikelelekayo!
Ndivele ndangena kwikhaya elitsha isinki endala yasekhitshini indala kwaye ikrwitshiwe kwaye irusi. Emva kokuba ndipeyintile, ndafaka le faucet intsha. Inika inkangeleko yanamhlanje kwaye ndiyayithanda ukutsala isitshizi. Kwakulula ukuyifaka (landela nje umkhombandlela).
Konke oku kujongeka nayo yonke imisebenzi. Inomtsalane kakhulu. Ukuya kwisiphelo esisezantsi se-chrome, isiphatho ezimbini, itepu yekhitshi esezantsi yentsimbi ukuya kufutshane nayo iyonwabisa! Ixabiso liyakhuphisana. Kulula ukuyiqhuba. Ndonwabe kakhulu ngale nto ndiyithengileyo.
intle, isebenza kakuhle itompu
Isebenza kakuhle. Ixabiso elimangalisayo ngexabiso. Kudala ndifuna ukutshintsha ipompo yethu ngonaphakade kwaye le iyasebenza kwaye ijongeka intle. Isitshizi asijiki. Qinisekisa ukuba unesisindo sokumisa esime ngokufanelekileyo.
Itepu iyimveliso entle. Kulula ukuyifaka ukuba ulwakhiwo lwesinki yakho kulula ukusebenzisana nayo. Kum, kufuneka ndilale phantsi ukuyifaka. Kodwa kufanelekile.
Ndiza kuthetha ngexabiso endingaqinisekanga ngalo malunga nokuthenga le nto kodwa ndiqinisekile ukuba ndiyenzile kwakulula ukufaka imisebenzi njengoko bekulindelwe kwaye yayilungile njengeepompo zakho zokugqibela kwaye kufuneka nditsho ukuba ungabhali uphononongo ikakhulu kuba ndiyalibala ke ukuba ndithatha ixesha ukubhala le nto ithetha ukuba ibifanele kwaye bendifuna abanye abantu kuhlahlo-lwabiwo mali babone kulungile ukuba bangaphuli i-bhanki ngelixa belungisa ikhaya lakho
Ixabiso elikhulu lombhobho olungileyo. Ndilithanda kakhulu inqaku elithi "nqumama". Kwakulula kakhulu ukuyifaka. Le yeyona faucet yesibini ndiyifumene kule nkampani, kwaye bobabini bayathandeka!
Itephu efanelekileyo yemali. Ukufakwa ngokulula, bekungafuneki ukuba ibe yimpompo, kwaye akukho kuvuza. Sijonge ukuhamba ngonyaka kwaye oku ibikukuhlaziya okungabizi kakhulu ekhitshini
Ndifunde uphononongo kwaye ndathatha ithuba kwaye ndiqinisekile ukuba ndiyenzile, olu ibiluphuculo oluhle kwikhitshi lethu kwaye ixabiso alikholeleki xa kuthelekiswa nevenkile ezinkulu zebhokisi.
Ngokuqinisekileyo ukuthengwa okugqwesileyo. Ijongeka ibiza kakhulu, iklasi kwaye iphakamisa ikhitshi. Ulwandiso luyamangalisa. Thanda ukugqiba. Umama wayeyifuna le kwaye wanelisekile.
Kanye le nto yayifuneka isinki yokuhlamba impahla. Kulula ukufaka izixhobo kuphela sisixhobo esitshintshayo. Phillips umqhubi. Ubotshelelwe ngaphandle kokuvuza kwaye ubanzi wonwabile.
Le faucet ibuyise ikhitshi lam ebomini! Yenziwe kakuhle kwaye kulula kakhulu ukuyifaka! Ndineendawo ezivuzayo okanye imiba ukuza kuthi ga ngoku! Ndicebisa !
Ndiyayithanda itephu yam entsha ndathenga ezi-2 zekhaya lam enye yeyokuhlala kwam. Zibukeka zintle kwaye zisebenza kakuhle!
Kulula ukuyifaka, kubandakanya yonke into oyifunayo. Ixabiso elikhulu lemali, musa ukuvumela ixabiso eliphantsi likwenze ube novalo!
Singabantu abaqhelekileyo abangenayo imibhobho eyongezelelweyo njengenkqubo yokucoca amanzi -ukufaka ngokulula. Ndinayo ishelufu ngendlela yokuba ubunzima abunakuya apho bukhona ngokuqinisekileyo qiniseka ukuba uphantsi kwesinki yakho icacile ukuba iyakwenza lula ukusebenza. I-Faucet ibukeka kakuhle kwaye iyilwe kakuhle. Ndiyayithanda ngokupheleleyo
Ndithenge le faucet yokuhlaziya isinki yam yasekhitshini. Ndihlawule umntu ozokundifakela endonwabileyo. Ndithengisa around. Imibhobho Emihle.